Izizathu ezi-10 eziphambili zokwakha iwebhusayithi yakho ngeWordPress | Martech Zone
Ngeshishini elitsha, nonke nikulungele ukungena kwintengiso kodwa inye into engekhoyo, iwebhusayithi. Ishishini linokuqaqambisa uphawu lwalo kwaye ngokukhawuleza libonise amaxabiso abo kubathengi ngoncedo lwewebhusayithi enomtsalane.
Ukuba newebhusayithi enkulu enomtsalane kufuneka kule mihla. Kodwa zeziphi iindlela onokukhetha kuzo ukwakha iwebhusayithi? Ukuba ungusomashishini okanye ufuna ukwakha usetyenziso lwakho okokuqala emva koko WordPress yinto enokufezekisa iimfuno zakho ngendlela enendleko.
Makhe sijonge ezi zizathu zilandelayo ze-10 zokuba kutheni i-WordPress ibalulekile kwishishini lakho ukuze uphile kule ndawo yentengiso eguqukayo.
Yakha iwebhusayithi yakho ngeWordPress ngendlela eyiNdleko- I-WordPress isimahla. Ewe! yinyani. Ayinamsebenzi ukuba ufuna iwebhusayithi yezorhwebo okanye ufuna indawo yebhlog yakho, inyani kukuba iWindowsPress ayithathi ntlawulo yongezelelweyo okanye ifihliweyo. Kwelinye icala, i-WordPress yinkqubo yemithombo evulekileyo ekuvumela ukuba uphucule okanye uguqule ikhowudi yayo yemithombo ethetha ukuba unokwenza ngokulula ukubonakala kwewebhusayithi yakho okanye ukusebenza kwayo.
Umsebenzisi-Wonxibelelwano ngobuhlobo- I-WordPress yenziwe ngendlela elula enceda bonke abantu bobuchwephesha kunye nabangengobugcisa. Esona sizathu siphambili semfuno enkulu yeWordPress kwihlabathi liphela. Ngakolunye uhlangothi, i-WordPress kulula ukuyisebenzisa kwaye ivumela abasebenzisi ukuba benze amaphepha abo ewebhu, iiposti, iimenyu ngexesha elincinci. Ungatsho ukuba yenza ukuba abantu basebenze lula.
Kulula ukukhuphela imixholo yasimahla kunye neePlagi- Sele sichazile ukuba ngenkxaso yeWordPress unokwenza iwebhusayithi yakho ngendlela ebiza iindleko. Ngaphaya koko, ukuba awunayo inguqulelo yeWordPress yeprimiyamu, ungakhathazeki, apha amakhulu emixholo yasimahla kunye neeplagi ziyafumaneka onokuzikhuphelela ngokulula kwiwebhusayithi yakho. Ukuba ufumana umxholo ofanelekileyo simahla emva koko unokugcina amakhulu eedola.
I-WordPress inokulinganisa ngokulula- Ukwakha iwebhusayithi esebenzayo kufuneka uthenge i-domain kunye nokusingathwa. Iindleko zokubamba yi- $ 5 ngenyanga xa igama lesizinda libiza malunga ne- $ 10 ngonyaka. Ngokusisiseko, iWindowsPress inokulinganisa iimfuno zakho zeshishini ukuze ingahlawulisi xa ufikelela kwizithuthi ezaneleyo okanye ufuna ukwandisa iwebhusayithi yakho. Kubonakala njengokuthengwa komdlalo wevidiyo. Xa unayo, akukho mntu unokukunqanda ukuba uyisebenzise.
Ilungele ukusebenzisa - Emva kokufaka iWindowsPress ungaqala kwangoko umsebenzi wakho. Ayifuni kuqwalaselwa, ngaphandle koku unokwenza umxholo wakho ngokulula, kwaye ungasebenzisa iplagi efanelekileyo. Uninzi lwexesha ukhangela ufakelo olulula olunokulungelelanisa ukutya kwamajelo eendaba, izimvo, njl.
I-WordPress ihlala iphucula - Uhlaziyo oluqhelekileyo alwenzelwanga ukhuseleko kuphela; bahlala benika amanqaku aphambili enza iqonga libe ngcono kubo bonke abasebenzisi. Ngaphaya koko, iqela leengcali labaphuhlisi 'lihlaziya iplagi entsha kunye neyahlukileyo ukonwabisa umsebenzisi. Unyaka nonyaka bazise iimpawu zesiko kwaye bavumela abasebenzisi ukuba bayihlole.
Iindidi ezininzi zeMedia - Wonke umntu ufuna ukwenza ukuba umxholo wabo wewebhusayithi utyebe kwaye ubandakanyeke. Kwaye unqwenela ukufaka ulwazi ngakumbi kwiphepha "malunga nathi". Iwebhusayithi iba nomtsalane ngakumbi ukuba ibandakanya ividiyo enomdla okanye igalari yomfanekiso. Ewe! I-WordPress ikunika ukhetho lokubandakanya abo ngaphandle komthungo ngendlela enomtsalane. Kuya kufuneka urhuqe kwaye ulahle umfanekiso okanye ungakopa-uncamathisele ikhonkco levidiyo oyikhethileyo kwaye iya kubonakala ngexesha elincinci. Ngapha koko unokubandakanya iintlobo zeefayile, ezinje nge .mov, .mpg, mp3, .mp4, .m4a.3gp, .ogv, .avi, .wav, .mov, .mpg phakathi kwabanye. Inika inkululeko yokulayisha into oyifunayo ngokungasikelwanga mda.
Papasha umxholo kwiXesha elifutshane- Ukuba ufuna ukupapasha iposti yakho ngendlela ekhawulezileyo ke iWindowsPress kufuneka ibe sisisombululo sakho sokuma. Ngokucofa nje imouse yakho, unokushicilela umxholo wakho ngomlingo. Ukongeza, ukuba unayo iapps yeWordPress kwiselfowuni yakho emva koko unokupapasha iposti yakho naphi na, nangaliphi na ixesha.
Ngaba unokudideka kwikhowudi ye-HTML? - I-HTML ayisiyo indebe yomntu wonke yeti. Kodwa i-WordPress ikunika iqonga apho unokufaka khona iposti yakho ngaphandle kwenkxaso ye-HTML. Oko kuthetha ukuba unokwenza amaphepha kwaye ugcine iiposti zakho rhoqo ungenalo ulwazi lwe-HTML.
Ikhuselekile kwaye Inokuthenjwa- Ngaphandle kwamathandabuzo, iWindowsPress liqonga elinamandla lokuphuhlisa iwebhu elilawula imicimbi yakho yokhuseleko ngokunjalo. I-WordPress ibalaselisa uhlaziyo rhoqo kunye neepatches zokhuseleko kwiwebhusayithi ezigcina indawo ekhuselekileyo kuwe. Ngezinye izilumkiso ezisisiseko, ungalawula ngokulula iwebhusayithi yakho yeWordPress kusiko.
Njengokuba usazi, WordPress yiwebhusayithi yobuqu okanye yentengiso. Isombulula ngobuqili inkqubo yakho yolawulo lomxholo kwaye ikuvumela inkululeko yokupapasha ngaphandle komda. Ukuba ufuna ukwakha iwebhusayithi yakho kwaye awunayo imali eyaneleyo yokwakha emva koko iWindowsPress iya kuba sisisombululo sakho sokumisa. Unokwenza iwebhusayithi yakho ngendlela ebiza iindleko. Ndiyathemba ukuba eli nqaku likunika umbono malunga nezibonelelo kunye nokubaluleka kweWordPress kule ndawo ihlala itshintsha indawo yentengiso.
tags: UkuThengiswa kweMpahlaumhlelihtmlIindidi zemultimediapluginsilungele ukusetyenziswaethembekileyoIsixayokuvikelaimixholoimbonakalo yomsebenzisiWordPress